चुरोट छाडेकाे २० मिनेटपछि नै देखिन थाल्छन् यस्ता परिवर्तन - ज्ञानविज्ञान
पछिल्लो समय युवापुस्तामा चुरोट फेशन जस्तै बनेको छ । सामान्य चियापसल देखी सार्वजनिक स्थलसम्म खुलेआम चुरोट सेवन गर्ने युवापुस्ता अहिले पनि प्रशस्त भेटिन्छ । जो चिन्ताको विषय हो ।
किनभने जो युवा चुरोट सेवन गर्न थाल्छ उसले आफ्नो जीवन त बिगार्छ बिगार्छ साथ साथै परिबार समाज र देशका लागि समेत बोझ बन्न थाल्छ । त्यसैले आज हामी तपाईँलाई आजैबाट चुरोट त्याग्न सल्लाह दिदै १० बर्षसम्म के कस्ता अवस्था फेस गर्नुपर्छ भनेर जानकारी समेत दिनेछौँ ।
चुरोट छोड्ने एउटा विधि: यसरी छोड्न सकिन्छ चुरोट
चुरोटमा हुने निकोटिनले खुसी तथा सन्तुष्ट भएको बेला सक्रिय हुने दिमागको एक विशेष भाग सक्रिय हुन्छ। यसरी खुसी भइँदा दिमागमा डोपामिन नामको एक हर्मोन पैदा हुन्छ।
गुलियो खाँदा, खुसी हुँदा, शारिरीक सम्पर्क गर्दा पनि यहि डोपामिन पैदा हुने गर्छ। नियमित डोपामिन पैदा हुँदा दिमागलाई डोपामिनको बानी पर्दछ। अनि नियमित डोपामिन पैदा गराउँन सोही कार्य दोहोर्याउन दिमागले बाध्य बनाउँछ। अनि लाग्छ लत।
माथीका यी प्रक्रिया निरन्तर गर्नुहोस्, प्रयाग गरे नै सफल हुने हो।चुरोट छोडौं, आफु अनि आफ्ना वरपरकाको स्वास्थ्य बचाऔँ।
कति चुरोट बराबर एक बोतल मदिरा ? कुन बढी खतरनाक ?
जाँड, रक्सी, चुरोटलले रोग निम्त्याउँछ । आयु घटाउँछ । यो त सबैलाई थाहा छ । तर कुनको असर कति पर्छ त ? यो कमैलाई मात्र थाहा हुन सक्छ ।
एक ब्रिटिस अनुसन्धानकर्ताले गरेको अनुसन्धान अनुसार ७५० मिलिलिटिर मदिराको असर र एक हप्तामा महिलाले लिने १० र पुरुषले लिने ५ चुरोटको जति नै हुन्छ ।ब्रिटेनका अनुसन्धानकर्ता भन्छन्, ‘यो कम पिउने मानिसको स्वास्थ्यप्रति जागरुक गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो ।’
यद्यपी विशेषज्ञहरु भन्छन्, ‘मदिराको तुलनामा चुरोट (सिगरेट) पिउनु ज्यादा खतरनाक सावित हुन सक्छ । र उनीहरुमा क्यान्सरको खतरा बढ्न सक्छ ।’ उक्त जोखिम कम गर्ने एकमात्र उपाय भनेको चुरोट पिउन छोड्नु हो ।
अनुसन्धानमा यो पनि भनिएको छ कि, जब स्वास्थ्य खतरामा हुन्छ, तब पिउने कुनै सुरक्षित मात्रा हुँदैन । अनुसन्धानका अनुसार कम पिउने मानिस पनि क्यान्सरको खतराबाट बाहिर हुँदैन ।
Don't Miss it बिहान खाली खुट्टा हिड्नुका यस्ता छन् फाइदा, जान्नुहाेस्
Up Next सावधान ! गम्भीर रोगको संकेत नङकाे रङले पनी देखाउछ